သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 သို့ပြောင်းလဲနည်း Androidsis
သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 သို့ပြောင်းလဲနည်း
အကယ်၍ တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကမင်းကိုဒီမှာသင်ပေးတယ်မည်သည့် Android ကိုမဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံ HTC နှင့်၎င်း၏ HTC One M9 ၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းပါဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပို့စ်မှာကိုရီးယား၊ ဆမ်ဆောင်းအခြေစိုက်နိုင်ငံစုံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အထင်ကရဖြစ်မှုကိုကျွန်တော်လည်းထပ်တူပြုလိမ့်မယ်။ Samsung ရဲ့ Galaxy S6.
သင်လိုချင်လျှင်သင်သိ သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါအနည်းဆုံး၎င်း၏ဗေဒစကားပြော, animated နောက်ခံပုံများ, Lock Screen နှင့် TouchWiz home interface ကိုယ်နှိုက်ကဤဆောင်းပါး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်လွတ်မခံသင့်ဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။
1 1st - Galaxy S6 Launcher ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
2 ဒုတိယ - Samsung Galaxy S2 ၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
3 တတိယ - Samsung ၏ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်းနောက်ခံတပ်ဆင်ခြင်း
4 4th - Samsung Galaxy S6 နာရီဝစ်ဂျက်အတွက် XWidget
1st - Galaxy S6 Launcher ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထင်ရှားသောထင်ရှားကျော်ကြားမှုအသွင်သဏ္achieveာန်ကိုရရှိရန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခမဲ့ Android Launcher ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်စတိုးမှလုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Un Samsung ၏ TouchWiz စတိုင် interface နှင့်အတူ Launcherမျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တွေ့ရသောလျှို့ဝှက်မီနူးကဲ့သို့သောအပိုဖြည့်စွက်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Toogles၊ မကြာသေးမီကအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အကြိုက်ဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိသော်လည်း။
ဒုတိယ - Samsung Galaxy S2 ၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း
Samsung Galaxy S6 ၏ပုံပန်းသဏ္achieveာန်ကိုရရှိရန်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်မလွတ်သင့်ပါ Samsung Galaxy S6 ၏ Lock Screen သို့မဟုတ် Lock Screen။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့သော့ခတ်မျက်နှာပြင် Galaxy S6 Edge application နှင့်ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ lock interface ကတော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ screen screen ကို unlock လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Samsung Galaxy S6 ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတာသေချာပါတယ်။
တတိယ - Samsung ၏ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်းနောက်ခံတပ်ဆင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကို Samsung Galaxy S6 နှင့်တူအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအချက်များမှာဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Wasabi အက်ပလီကေးရှင်းကိုကူးယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ Crystal တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများအဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ့် Samsung Galaxy S6 ၏ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်းနောက်ခံ၏အသွင်အပြင်.
4th - Samsung Galaxy S6 နာရီဝစ်ဂျက်အတွက် XWidget
နောက်ဆုံးအဆင့် သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ ကျနော်တို့ကို download, တပ်ဆင်နှင့်အတူပေးလိမ့်မည် XWidget၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ (သို့) Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ application နဲ့ငါတို့ကိုယ်ပိုင် Widgets တွေဖန်တီးနိုင်တာအပြင် widgets တွေကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်တဲ့အပြင်ဒီနာရီနဲ့တူတူပဲ။ Samsung Galaxy S6 နာရီဝစ်ဂျက်.
ရေးသားသူ: SuperDesk ဆော့ဝဲ
ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းလေးမျိုးကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ခြင်း၏နောက်ဆုံးရလဒ်မှာဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးနှင့်ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ Samsung Galaxy S6 ၏အစစ်အမှန်အသွင်အပြင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android ကို Samsung Galaxy S6 သို့ပြောင်းလဲနည်း
S Launcher သည်အသစ်ပြုပြင်ထားသော KK Launcher ဖြစ်သည်။ Google Play မှမှတ်ချက်များအရ Lock Screen သည်လူသိများလွန်းသလော ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ် ...
မူလမြွေဂိမ်းကိုယခု Google Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်
အနာဂတ်၏ Gadgets: အသုံးပြုသူ ၂၀ တွင် ၁ ယောက်သည် ၂၀၂၀ တွင် smartwatch ရှိလိမ့်မည်